Taunggyi Times (တောငျကွီးတိုငျးမျ): January 2013
အင်းလေးဟိုတယ်ဇုန်စီမံကိန်း ဒေသခံများ၏ တောင်းဆိုမှုအရ ခေတ္တရပ်နားလိုက်ရ
By ဖိုးဇေ | ဇန်န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၃ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်၊ သလဲဦးကျေးရွာအုပ်စု၊ အင်ကြင်းကုန်းကျေးရွာရှိ
ဟိုတယ်စီမံကိန်းနေရာတွင် (၂၉-၁-၂၀၁၃) ရက်နေ့ နေ့လည် (၁၁) နာရီအချိန်တွင် မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်နေသော မြေထိုးစက်များအား ဆက်လက်လုပ်ကိုင်မှု မပြုလုပ်ရန် အင်ကြင်းကုန်းကျေးရွာနေ ကိုအောင်ကျော်မျိုး ဦးဆောင်သော ရွာသူရွာသား (၄၀) ဦးခန့်တို့နှင့် ဟဲယာရွာမကျေးရွာရှိ အနောက်ရွှေကျောင်းမှ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးခေမာနန္ဒ ဦးစီးသော သံဃာတော် (၁၅) ပါးခန့်တို့သည် မြေထိုးစက်၏ရှေ့မှ ပိတ်ဆို့တားဆီးခဲ့သဖြင့် ဟိုတယ်ဇုန်စီမံကိန်း
မြေသားလုပ်ငန်းအား ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရကြောင်း သိရှိရသည်။
International Folklore Festival ပအိုဝ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု အကအဖွဲ့ The Most Informative Performance ဆုရရှိ
By ခွန်စိမ်းမောင် (တောင်ကြီး) | ဇန်န၀ါရီလ 27 ရက် ၊ 2013 ခု | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ သူရိန်ရာဇဖတ်တက္ကသိုလ် ဦးစီးကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၈) ကြိမ်မြောက် Surin International Folklore Festival ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ပွဲတော်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပအိုဝ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအကအဖွဲ့မှ The Most Informative Performance ဆုရရှိကြောင်း သိရသည်။
တောင်ကြီး - အောင်သပြေ Toll Gate လမ်းအသုံးပြုခ ယခင်ထက်ပိုမို ကောက်ခံနေ
By ဖိုးဇေ(တောင်ကြီး) | ဇန်န၀ါရီလ ၂၂၊ ၂၀၁၃ ခု | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
တောင်ကြီး (တောင်ကြီးတိုင်းမ်) ။ ။ တောင်ပေါ်ဒေသလမ်းဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် ဟဲဟိုး -တောင်ကြီး (၂၄) မိုင် ယာဉ်ဖြတ်သန်းခကောက်ခံရေးဂိတ် အောင်သပြေ Toll Gate မှ လမ်းအသုံးပြုခ
ငွေကြေးကောက်ခံနေမှုမှာ ပုံမှန်သတ်မှတ်ငွေကြေးအတိုင်း ကောက်ခံမှုမဟုတ်ပဲ
By ခိုင်လင်း(မေဃ၀တီ) | ဇန်န၀ါရီ (၂၀) ၂၀၁၃ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်္ဂလီတွေရဲ့လုပ်ရပ်တွေ၊ သမိုင်းလိမ်၊ သမိုင်းတုတွေဟာ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးရဲ့ အကြီးမားဆုံးသော အဟန့်အတားတွေဖြစ်သလို နောက်ထပ်ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပေါ်စေရေးကိုလည်း ဦးတည်နေပြန်တယ်။
By Kanbawza Win | January 20, 2013
There cannot be the Union of Burma but only the Union of Myanmar, with the imperial Mahar Myanmar race lording perpetuity over the ethnic nationalities was authentically proven to the world when “The decision to use air power against ethnic militias,atactic unheard of even under military rule, runs counter to reformist President Thein Sein’s assurances that troops were acting only in self defense,” wrote Martin Petty of Reuters. Very lately there was indiscriminate shelling kills some civilians including some women and children in Laiza.
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် နိုင်ငံတကာယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ပွဲသို့ မြန်မာပြည်ကိုယ်စား သွားရောက်မည့် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားအကအဖွဲ့ ရန်ကုန်တွင် ပဏာမဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့
By ခွန်ထီးခမ်း | ဇန်န၀ါရီလ ၁၄ ၊ ၂၀၁၃ ခု | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ရန်ကုန် (တောင်ကြီးတိုင်းမ်)။ ။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် (၈) ကြိမ်မြောက် Surin International Folklore Festival ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စား သွားရောက်ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်ကပြမည့် ပအိုဝ်းအမျိူးသားကိုယ်စား အကအဖွဲ့က ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီ ၁၃ ရက်နေ့၌ ရန်ကုန် ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ တောင်ကြီးကျောင်းတိုက်တွင် ပဏာမ ဖျော်ဖြေကပြခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် အခမဲ့ ထိုင်း အင်္ဂလိပ် နှင့် ကွန်ပျုတာ သင်တန်းကျောင်း ဘန်ကောက်မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်
ခွန်စိမ်းမောင် (တောင်ကြီး) | ဇန်န၀ါရီ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၁၃ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ မြန်မာပြည်ကလာတဲ့ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် ထိုင်းဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့် ကွန်ပျုတာပညာရေးဆိုင်ရာ အခမဲ့သင်တန်းကျောင်းကို ဒီနေ့ (၁၃-၁-၂၀၁၃ ) ခုနှစ် ဘန်ကောက်မြို့ ဘန်ကပိ (ဟက်ပီးလဲန်) ရပ်ကွက်မှာ စတင် ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိပါတယ်။
အောင်ပန်းမြို့ အောင်ချမ်းသာစာသင်တိုက်၌ သာသနဟိတကာရီ သုံးထပ်ကျောင်းဆောင်ကြီး ရေစက်ချပွဲ ကျင်းပ
ခွန်စိမ်းမောင် (တောင်ကြီး) | ဇန်န၀ါရီ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် | (တောင်ကြီးတိုင်းမ်)
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ အောင်ပန်းမြို့၊ အောင်ချမ်းသာစာသင်တိုက်၌ ၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လ ကွယ် (လဆုတ် ၁၄ ရက်) (၁၁၊ ၁၊ ၂၀၁၃) သောကြာနေ့တွင် စာသင်တိုက်အတွင်းရှိ သာသနဟိတကာရီ သုံးထပ်ကျောင်းတော်ကြီး ရေစက်ချအလှူပွဲတစ်ရပ်ကို ကြီးကျယ်ခန်းနားစွာ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
Video Footage Obtained By Irrawaddy Shows Fighting Between the Burmese Army and KIA in Kachin State
အောင်အောင် (မြစ်မခ) | Jan 5, 2013 | Myit Makha Mediagroup
ကေအိုင်အိုဌာနချူပ်အနီးက တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေ့ရှိချက်များအား ဇန်န၀ါရီလ ၇ ရက်နေ့မှ ၁၀ ရက်နေ့အထိ ထိုင်းနုိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့၌ ကျင်းပမည့် UNFC ၏ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ညီလာခံတွင် တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချူပ် ဥက္ကဌနှင့် UNFC ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက ဆိုသည်။
By Kanbawza Win | January 5, 2012
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ (၆၅) မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ကို ဟိုပုံးမြို့ရှိ နောင်တောင်းပရိဟိတကျောင်းတွင် ကျင်းပ
ခွန်စိမ်းမောင် (တောင်ကြီး) ဇန်န၀ါရီ ၄ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ။ (တောင်ကြီးတိုင်းမ်)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၏ (၆၅) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကို ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဟိုပုံးမြို့ရှိ နောင်တောင်းပရဟိတကျောင်းတိုက်၌ ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ ထိုင်းစာသင်ကျောင်းနှင့် ထိုင်းလူထုအကျိုးပြု အလှူငွေများပေးအပ်
ခွန်စိမ်းမောင်(တောင်ကြီး)၊ ဇန်န၀ါရီ ၃ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ဖန်ငါခရိုင်၊ တကိုထုန်းမြို့နယ်၊ ခုတ်ကလွယ်ရပ်ကွက်ရှိ ကျောင်းသားကျောင်းသူ တစ်ရာကျော် စာသင်နေတဲ့ ဆောက်လုပ်ဆဲအခြေခံပညာမူလတန်း ၀ပ်ထာနွန်စာသင်ကျောင်းအတွက် ၀ပ်ထာနွန်ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်မှတဆင့် ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးအား စာသင်ကျောင်း တည်ဆောက်ရေး မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ စုပေါင်းအလှူငွေ ဘတ် (၂၀၀၀၀၀) နှစ်သိန်းကို ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
မဲဆောက်ဒေသရှိ တိုင်းရင်းသားများ နှစ်သစ်ကြိုဆို ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူ
ခွန်စိမ်းမောင်(တောင်ကြီး) | ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်၊ ၂၀၁၃ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဒေသရှိ မဲဆောက်မြို့မှ တိုင်းရင်းသား (၇) မျိုးတို့၏ စည်းလုံးညီညွတ် စုပေါင်းကာ ဆွမ်းဆန်စိမ်း လောင်းလှူပွဲကြီးကို (၁-၁-၂၀၁၃ ) ခုနှစ်မှာ စည်းကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။